Iibso Saldhig Korantada Cusbada & Mashiinka Mashiinka Korantada Lagu Dhigto - Rar Bilaash ah & Cashuur La'aan | WoopShop®
Salt Electric Automatic & Booqday Furimaha Dagaalka Furimaha Dagaalka
$ 29.99 qiimaha joogtada ah $ 57.99
Color Booqday Furimaha Dagaalka 2pc-Q Booqday Furimaha Dagaalka 1pc-W Booqday Furimaha Dagaalka 1pc-Q Booqday Furimaha Dagaalka iyo Saldhig-W Booqday Furimaha Dagaalka 2pc-W Booqday Furimaha Dagaalka iyo Saldhig-Q
Booqday Furimaha Dagaalka 2pc-Q Booqday Furimaha Dagaalka 1pc-W Booqday Furimaha Dagaalka 1pc-Q Booqday Furimaha Dagaalka iyo Saldhig-W Booqday Furimaha Dagaalka 2pc-W Booqday Furimaha Dagaalka iyo Saldhig-Q
Qalabka Mashiinka Korantada ee Cusbada & Mashiinka Mashiinka - Booqday 2pc-Q gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nambarka Tusaalaha: 76231
Magaca: Furimaha Korantada
Magaca Shayga: Milix Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Maaddooyinka: ABS + Birta Aan La Taaban
Miisaanka Net: 210g / 240g
Codsiga: basbaas shiidan, Bariis, Qamadi
Muuqaal ku habboon: Jikada, Cunnooyinka jikada, Cunnooyinka, Cuntada, iwm.
Waxyaabaha: Booqday Furimaha Dagaalka basbaasku wuxuu ka samaysan yahay bir bir ah iyo ABS caag ah, miridhku iyo daxalka u adkaysta, saamayn kuma yeelan doono dhadhanka dhulka dhir udgoon
Batariga: Qaybta Hore waxay ubaahantahay baytariyada 4 AA iyo nooca la casriyeeyay waxay ubaahanyihiin 6 (kuma jiraan xirmada)
Saldhigeenu wuxuu ka samaysan yahay alwaax iyo bir bir ah oo darajo sare leh, miridhku-cad yahay oo waara, ma aha oo kaliya inuu si fiican u hagaajin karo mashiinkaaga xoqidda basbaaska, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa qurxinta jikada ee quruxda badan
Wehel la'aanta la hagaajin karo: Si fudud u hagaaji isku-ekaanshaha dhir udgoon ee wanaagsan ama aan dhab ahayn.
Naqshad habboon: Naqshadaynta biibiile aan xad lahayn oo bilaa xadhig ah ayaa fududaynaysa in lagu dhaqaaqo.
Caddaynta soo daadashada: Waxay la timid dabool nadiifin kara miiskaaga miiska.
Si fudud loo isticmaalo: Hawlgal hal-gacan ah, si fudud loo riixo badhanka.
Si fudud loo nadiifiyo: Qaybaha kala bixi kara si fudud ayaa loo nadiifin karaa.
Ha quusin biyaha ama dareerayaasha kale.
Cusbada, basbaaska iyo bateriga kuma jiraan.
Fadlan u oggolow kala duwanaanshaha 1-3mm sababtoo ah cabbirka gacanta, mahadsanid!
Farqiga u dhexeeya kormeerayaasha kala duwan awgood, fadlan fahan in sawirka laga yaabo inuusan ka tarjumeyn midabka dhabta ah ee shayga.
Yimid si dhakhso leh oo si fiican loo buuxiyey. Alaab aad u wanaagsan oo tayo fiican leh.
Si sax ah u shaqee, ma jiraan wax baytariyaal ah oo lagu daray, midkiiba lix qaybood ..
Ku raaxeysiga taabashada. Baahan 4 baytariyada AA. Waxaan aaday Ukraine muddo dheer. Si fiican loo buuxiyey. Sawir ayaan ku dari doonaa
Yimid si dhakhso leh, si fiican loo soo baakadeeyey… sida sawir alaab qurux badan. Wali lama dhadhamin laakiin wuxuu muujinayaa mid aad u wanaagsan
Waxay umuuqataa mid weyn, culus oo gacanta kujira, oo sifiican loo sameeyay. Waxaa ku shaqeeya lix baytariyada AAA.